कोइला बालेर बन्द कोठाभित्र सुतेकी सुत्केरीको मृत्यु ! «
कोइला बालेर बन्द कोठाभित्र सुतेकी सुत्केरीको मृत्यु !
साँखु, १९ पुस । पुसको कठ्याङग्रिदो जाडोबाट बच्न कसैले हिटर बाल्छन्, कसैले कोइला बाल्छन् । यहिँ क्रममा आगलागी हुनेदेखि ज्यानै जाने सम्मको घटना घट्ने गरेको छ । प्राय दिनहुँ जसो संचारमाध्यममा यस्ता समाचारहरु प्रकाशित प्रसारित भैरहेका छन् तर पनि हामी अझैँ सचेत भएका छैनौ । हिटर, कोइला बालेरै बन्द कोठामा सुत्छौँ त्यसपछि घट्छ अप्रिय घटना ।
यसै क्रममा गए राति कोइला बालेर सुत्दा एक सुत्केरीको ज्यान गएको छ । काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका-७ सुकेखोलामा बन्द कोठाभित्र परिवारसँग सुतेकी ३२ वर्षीया विन्दु मगरको मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीका अनुसार सुकेखोलाको एक घरमा भाडामा बस्दै आएकी मगर पाँच महिनाकी छोरीसहित बुधबार राति सुत्ने बेलामा कोठाभित्र दाउरा र कोइला बालेर सुतेकी थिइन् । श्रीमान् र तीन छोरीसहित पाँच जनाको परिवार एउटै कोठामा सुतेका उनीहरूमध्ये श्रीमतीको मृत्यु भएको हो ।
घटनाको प्रकृति हेर्दा चिसो भुइँमा र कोठाको झ्यालढोका सबै बन्द गरी दाउरा बालेर सुतेकाले निसास्सिएर मृत्यु भएको हुनसक्ने आशंका रहेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग साँखुका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी खनालले जानकारी दिए ।